Home Somali News Somaliland: Jamaal Cali Xuseen Oo Daadifeeyay Mowqifka Cali Guray Iska Taagay Shir...
Murashaxa Madaxweynaha ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID Jamaal Cali Xuseen (Jamaal Qoslaaye) ayaa daadifeeyay Guddoomiye Ku xigeenka saddexaad ee xisbigooda Cali Guray, waxaanu sheegay in aanu waxba u dhimaynin shirka mucaaridka uga socda magaaladda Hargeysa oo uu isagu hore uga biyo diiday isla markaana qaadacay inuu ka qeyb-gallo.
Majaajilayste Jamaal Cali Xuseen waxa uu sheegay in Cali Guray uu yahay qof aan metali Karin mawqifka xisbiga UCID. “Qofka Bini’aadmiga ahi fikir shakhsi ah wuu yeellan karaa, Maqnaanshaha uu Cali Guray ka maqnaaday isaga ayay gaar u tahay. Laakiin mucaaridkii cid waliba way joogtay shirka isaga ayaa ka maqnaa oo ay ku kooban tahay xisbi ahaan lama qabno fikirkiisa. Shirkan mucaaridku way u dhan yihiin oo waanu ka qeyb gelaynay. Manay ahayn inuu sida uu u hadlay u hadlo,”ayuu yidhi Jamaal yare oo la Hadlayay TV-ga Som News TV.
Geesta kalena,Majaajilayste Jamaal Cali Xuseen oo la weydiiyay waxa ka jira in khilaaf u dhaxeeyo isaga iyo Guddoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe, waxaanu kaga jawaabay inuu aflagaado uu u jeediyay wargeyska DAWAN, Waxaanu yidhi “Horta bini’aadamku waa kala duwan yahay, waxa beentaasi faafin jiray wargeyska Dawladda oo aan Anigu Dawan ma Idhaahdee Dawakh aan u aqaano. Warbaahintii ummaddu wada lahayd ayaa loo adeegsanayaa baro-bagaandeynta xisbiyadda mucaaridka ah. Markaa arrintaasi waa dacaayadahoodii raqiiska ahaa. Runtii waa ayaan darro Annagu waanu dulqaadanaynaa. Laakiin iyagu (dawladdu) ma dul-qaadanayaan oo waa kuwaa xidh-xidhaya wargeysyadii.”